Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Mandrehitra ny tsena maneran-tany ny zavakanto aziatika
Tamin'ny 20:00 tamin'ny 18 Novambra, natolotr'i Rongbaozhai avy any Shina ho lavanty ny dika mitovy amin'ny Integrated Digital Art (IDA) amin'ny Detailed Portrait of Rivers and Mountains nosoratan'i Fu Baoshi (1:1), izay manana tantara 350 taona. trano miasa avy amin'ny sivilizasiona fahiny efatra. Ny IDA dia navoaka tamin'ny alàlan'ny IP.PUB, mpiara-miasa amin'ny Seud Technology. Ny lavanty dia nampiantranoin'ny mpampiasa EASTIP tao amin'ny OpenSea, sehatra ara-barotra ara-javakanto nomerika lehibe indrindra eran-tany.
Ny IDA version of Detailed Portrait of Rivers and Mountains dia maneho sary hoso-doko miavaka, izay ny borosy sy ny fandokoana dia amin'ny fomba Shinoa nentim-paharazana, fa ny famoronana sy ny lokony dia manondro ny an'ny hosodoko menaka tandrefana. Ny sanda ara-javakanto avo lenta dia niteraka ady tolotra tao amin'ny lavanty OpenSea, ary ny sary hosodoko iray nataon'i Fu Baoshi dia namidy CNY 187 tapitrisa tamin'ny lavanty tamin'ny Jona 2017.
Taorian'ny adiny roa nanaovana tolotra mafonja, IDA # 800002 # 00001, Detsarin'ny Renirano sy Tendrombohitra dia nandresy tamin'ny farany ny mpampiasa, tamin'ny vidiny USD $13785.53. Ity no fotoana voalohany nidiran'ny sangan'asan'ny kanto nentim-paharazana Shinoa teo amin'ny tsena iraisam-pirenena niaraka tamin'ny teknolojia blockchain, ary nanome fomba vaovao ho an'izao tontolo izao hahitan'ny zavakanto tatsinanana, sy handre ny feon'i Shina.
Ny IDA dia navoaka tamin'ny rafitra fisoratana anarana tena izy ao amin'ny tranokala IP.PUB, mifototra amin'ny Wenchang Chain an'ny BSN Open Consortium Blockchain, izay mifanaraka amin'ny fitsipika Shinoa. Amin'ny alàlan'ny fanasarahana ny fanangonana zavakanto ara-batana amin'ny mari-pankasitrahana ho an'ny fananana nomerika, ny fahazoan-dàlana ho an'ny fananana nomerika nomerika IDA sy ny fizotran'ny fizotrany dia azo trandrahana mazava sy voamarina tsara.
Rehefa amidy maneran-tany ny mari-pankasitrahana nomerika IDA dia afindra avy any Wenchang mankany Ethereum amin'ny alàlan'ny teknolojia cross-chain IRIS Hub (aka IRISnet). Ny Ethereum avy eo dia mifandray amin'ny OpenSea sy ny fifanakalozana manerantany hafa izay afaka manohana ny fepetra takian'ny lalàna samihafa. Izany dia manome ny tsena eran-tany amin'ny zavakanto tatsinanana azo itokisana, miaraka amin'ny fiaviany azo trandrahana.
Hampiasa OpenSea ihany koa ny EASTIP hananganana IDA ho an'ny sanganasan-kanto tatsinanana fanta-daza hafa, toa an'i Qi Baishi's Pattra Leaves Insect Painting sy ny hiran'i Li Keran's Fisherman on Clear River. Araho hatrany raha hijery raha hamirapiratra amin'ny loko vaovao ireo sanganasa manan-danja ara-kolontsaina avy amin'ireo sivilizasiona tranainy efatra ireo aorian'ny fampidirana ny teknolojia NFT sy IDA!